Ungaita Sei Kuyera Nhare Yekutsvaga Algorithm Impact? | Martech Zone
Ungaita Sei Kuyera Nhare Yekutsvaga Algorithm Impact?
Chipiri, April 14, 2015 Chipiri, April 14, 2015 Douglas Karr
Isu takatumira nezve matanho anodiwa ku dzivisa kurasikirwa kukuru kwekutsvaga kwekutsvaga kuburikidza nekutsvaga kwefoni paGoogle kuuya vhiki kubva ikozvino. Shamwari dzedu paGShift dzave dzichinyatso tarisa shanduko uye dzakaburitsa yakanyanya zvakadzama posvo pane inotarisirwa kukanganisa yeiyo algorithm shanduko.
Kuyera manzwiro evashambadzi uye kuunganidza maonero pamusoro peiyi shanduko yakakosha, gShift yakaita ongororo yevanopfuura 275 vatengesi vedigital pamabhizimusi akasiyana siyana kusanganisira vezvitoro, zvekufambisa uye zvemotokari. Takamhanyisa ongororo iyi pakati paKurume 25 - Kubvumbi 2 uye vanopfuura makumi matanhatu neshanu muzana vevatori vechikamu vaive vakuru vezvisarudzo vepamusoro-soro nemazita kubva kuMutungamiriri kuenda kuCMO. Mhinduro dzatakatambira dzakaratidza humwe hunhu hunonakidza hwekuti maindasitiri nyanzvi ari kugadzirira sei shanduko yaApril 65st.
Zvinofadza, inopfuura hafu yevashambadzi vese veadhijitari tenda kukanganisa kwacho kuchakura… asi zvinonyanya kunetsa ndezvekuti vatengesi vedigital havana nzira yekucherechedza zvinoitika. gShift's webhu inowanikwa software inoongorora chinzvimbo chesaiti yako pakutsvaga nhare.
Iwe unogona zvakare kugadzirira kambani yako yeGoogle yaApril 21st mobile SEO algorithm shanduko ine yakasarudzika gShift Nharembozha SEO Benchmark mushumo yemaitirwo ako ewebhu aripo parizvino pane desktop vs. Uye ita chokwadi chekutora demo repuratifomu yavo - zvinonakidza kwazvo!
Tags: April 21google mobile searchgoogle nhare yekutsvaga algorithmgshiftnharembozhamobile searchmobile seo
Buzz, Viral kana Izwi reMuromo Kushambadzira: Ndeupi musiyano?
Wambundira Vavengi Vako? Zvimwe Ndiko Kuda Vako Vaunoda!